Am-bohitra ny velona
Boky Firaketana ny Fiteny sy ny Zavatra Malagasy (dictionnaire encyclopédique malgache) avoakan’ny mpiadidy ny «Fiainana» sy ny namana maro eran’ny Nosy : professeur E. kruger, Ravelojaona mpitandrina, F. Jonah-Gabriel mpampianatra, H. Rabeony, J. Ratsima, H. Randzavola, J. Ramambasoa, F. Ratrema, G. Andriamanantena, F. Rajaobelina, Josefa Rakotovao mpitandrina, Rabevazaha, Rahajason mpampianatra.
Izany no vakin’ny takela voalohany indrindra, tamin’ny FIRAkETANA, nosantarina tamin’ny volana janoary 1937 : mbola 100 francs no vidiny tamin’izany. Roambivalopolo taona aty aoriana, tsy mahagaga raha avo foloarivo heny ny vidin’ny iray amin’ireny laharana ireny. Tsy Tantara fe tantara fotsiny, fa fomba fiteny ny tenin-drazana izay mila ho zary adino. Tsy Tantara fe tantara fotsiny, fa fomba mahaolona anivon’ny tontolo izay zara iniana adinoina. Ny Razantsika hendry dia nonina an-kavoana, am-bohitra, izay nanolotra ny rano, farihy, dobo, toeran’ny faria namboleny. Zavontany ny vohitra, havoana, tendrombohitra, voatanisa ao amin’ny Firaketana. Indreto, ho tanety lava misy hisainantsika ankehitriny, izay manditsaka miampatra anaty honahona sy heniheny ary hetrina, anaran-tanàna vitsivitsy. Vohitra an-kavoana, fara faharatsiny an-tampon-tanety. Tsy lavitra ny rano ery ambany, avaratra, atsinanana, atsimo, andrefana.
ANoSIMANJAkA : tanàna voahodidin-keniheny ao ambany andrefan’Ambohitrimanjaka. AMBoHITRIMANJAkA : faritany lehibebe misy tampon-tanety sy tendrombohitra an-dafy andrefan’Ambohidrapeto. AMBoHIDRAPETo : isan’ny Tendrombohitra Roambinifolo ery an-dafy andrefan’Ikopa, ambony andrefana somary avaratr’Anosimasina, ary ambony avaratr’Itaosy. ITAoSy : tanàna sy toerana ery andrefan’Antananarivo, andafin’Ikopa, andrefan’Ambohijafy sy Ambaniala. Vinany (rano roa mihaona) no atsimony ary Ambohidrapeto no avarany.
Etsy Ilafy, manolotra ny tokotanin’ny Rova ny sekolim-panjakana. Tsy manafintohina izany satria raha ny Tsena taloha no nampitoviana sata tamin’ny Rova, mendrika hizaka izany koa ny Sekoly hatrany ambanivohitra rehetra sy ny tany lavitr’Andriana tsy andrenesam-peo raha tsy efa iharam-boina. Raha ny tokony ho izy, mahay Tantara farafaharatsiny ireo ankizy miantombo-mianatra eo antampon-tanàn’Ilafy ireo na dia ny fandinihina isan’andro ilay lapa tokana namelan-kafatra sy vakoka ary ny toeran’ny Fitomiandalana fotsiny aza.
ILAFy : havoana misy tanàna mifono ala tompontany. Ny renirano Mamba no mandalo ery ambany avarany. Misy sekoly protestanta ho an’ny akizy eo akaikin’ny fiangonana. Misy sekoly katolika eo ambany andrefana ary sekolim-panjakana ao antampon-tanàna.
AMBoHIMANGA : tanàna an-tendrombohitra mifono ala ; AMBoHIDRATRIMo : tanàna an-tampon-kavoana ; AMBoHIMANAMBoLA : tanàna eo amin’ny havoana antonontonony tsy dia avo milangalanga ; AMBoHIMAILALA : tendrombohitra eo avaratra andrefan’Ambohibe, atsimon’Ilafy, ary atsimo andrefan’i Manazary. Na dia iva kely kokoa noho Ambohibe aza izy dia isan’ny toerana manerinerina sy mahatazana fatratra ; AMBoHITRANDRIANANAHARy : tendrombohitra avo misy hady eo ambony atsinanana somary avaratr’Alasora. IMERINARIVo : tanàna kely an-tampon-kavoana, atsimon’i Manjakandriana, atsimo andrefan’i Mantasoa, tsy lavitra ny renirano Varahina sampan’Ikopa ; AMBoHITRARAHABA : tanàna miorina eo amin’ny tampon-tanety ; IMERIMANJAkA : vohitra kely ao andafy andrefan’i Alasora, mifanao Alahamady sy Adimizana izy roa, elanelanintanimbary.
ILEMPoNA : tany lemaka ngezabe, vakivakin’ny tatadrano maro, ka voaova ho tanimbary midadasika. Tahaka izany BETSIMITATATRA. Tahaka izany MoRIANDRo.
Avy any Atsinanana mankany Andrefana, Ifanongoavana hatrany Itasy : nitovy hatrany ny fomba, dia ilay fahendren-drazana. Ny rano an’ny rano, ny hetrina ho an’ny tanimbary, ny vohitra ho an’ny olona. IFANoNGoAVANA : tendrombohitra eo anelanelan’ny fizarandranon-ny ony Mangoro ao ambany atsinanana (Bezanozano) sy Ikopa mivarina miankandrefana ho aty Antananarivo. ITASy : misy havoana be vatolampy, toa nosy mandroso anaty farihy, avy eo atsimo, atohin’ny andilantany toa tetezana mankeny aminy. Ambohiniazy na Amboniazy no anaran’io havoana saiki-nosy io. Ao an-tampon-ny harambatony no misy ny fasan’Andriambahoaka.
Tsy alfa, tsy omega : anivo.
Rhum artisanal – Une proposition de loi sur le rhum artisanal en vue
Le nerf sensible